Jubbaland iyo Puntland oo shaaciyay Guddi muddo laga sugayay, xili ay horey… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulada Jubbaland iyo Puntland oo horey uga biyo diidanaa Magacaabista xubnaha guddiga doorashada heer maamul Goboleed ayaa ugu dambeesay soo magacaabay xubnaha guddiga ku matali lahaa kadib cadaadis xoogan oo uga yimid Beesha Caalamka.
Madaxda labada maamul Goboleed ayaaana aqbalay dadaaladii uu waday Wakiilka Beesha Caalamka James Swan oo ku aadanaa xal u helida doorashada, waxa ayna labada Madaxweyne ugu dambeen aqbaleen in guddiga doorashada soo magacaabaan.
Waqti dambe oo habeenkii xalay aheyd ayey Puntland iyo Jubbaland soo saareen War-saxaafadeed wadajir ah oo ay uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray Muqdisho iyo khilaafka weli ka taagan doorashada.
Labada maamul ayaa Madaxda dowladda Federaalka SOomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedyada ugu baaqay inay shir deg deg ah isugu yimaadan Magaalada Muqdisho 30-ka bishaan, six al buuxa looga gaaro doorashada dalka ka dhaceya.
Halkan ka Akhriso Magacyada xubnaha labada maamul guddiga ku matalaya
Liiska Guddiga Doorashada Heer Maamul Goboleed ee Jubbaland
Liiska Guddiga Doorashada Heer Maamul Goboleed ee Puntland